RudderStack: Wulite Platform nke Onye Ahịa Gị (CDP) | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 16, 2020 Tọzdee, Ọktoba 15, 2020 Douglas Karr
RudderStack na-enyere ndị ọrụ injinia data aka inweta uru dị ukwuu karịa data ndị ahịa, yana Ahịa Data Ndị Ahịa (CDP) emere maka ndị mmepe. RudderStack na-anakọta data ụlọ ọrụ site na njirimara ndị ahịa ọ bụla - gụnyere web, mobile, na backend system - ma ziga ya na ezigbo oge karịa ebe 50 dị na igwe ojii na nnukwu ụlọ nkwakọba ihe data ọ bụla. Site na ijikọ na nyochaa data ndị ahịa ha n'ụzọ nzuzo na ụzọ nchekwa, ụlọ ọrụ nwere ike ime ka ọ bụrụ omume azụmaahịa na ọrụ ha niile.
Omenala CDP gbalịrị idozi maka nchịkọta data na ntinye, mana ọ dị nwute, imirikiti n'ime ha na-eme ka nsogbu ahụ ka njọ site na ịmepụta mgbakwunye data na oghere oghere. Ndị injinia data na - ahụkarị onwe ha n’etiti, na - enyere ikike nke ngwa ọrụ aka otu aka Snowflake na DBT n'ihi na ihe ndị ọzọ nke nchịkọta ahụ adịghị ejikọta na nnukwu ọrụ data ha.
RudderStack na-etinye ndị mmepe, ngwa ọrụ ha masịrị ha, na ụlọ ụlọ ọgbara ọhụrụ n'ihu na etiti, na-enyere ndị injinia data na ụlọ ọrụ ha aka ịchọpụta ohere ọhụụ dị ike n'ụzọ ha si jikọọ sistemụ ndị a dị oke egwu ma tinye ha n'ọrụ n'ofe nzukọ.
RudderStack Cloud: Uzo ohuru nye ndi ahia gi
Otu n'ime ụlọ ọrụ mbụ ịkwaga RudderStack Cloud bụ Ihe kachasị mkpa, Izi ozi na-emeghe ihe na mmekorita ihe eji eme ihe maka ebe ndi mmadu nwere ntụkwasị obi. Companylọ ọrụ ahụ na-ejikwa ọtụtụ data data sitere n'aka ndị ahịa ya ma wuo akụrụngwa CDP ya na ngwa ọrụ ọgbara ọhụrụ, gụnyere Snowflake, DBT, na RudderStack Cloud.
Site na igwe ojii RudderStack, anyị ewepụla mmachi na oke ihe omume ma nwee ike izipu data niile anyị chọrọ Snowflake. Anyị nwere ike nyochaa ma mee ihe niile dị mkpa ndị ahịa data, na-emecha-aghọ ndị ọzọ data-chụpụrụ azụmahịa. ”
Alex Dovenmuehle, Onye isi nke Data Engineering, Nke kacha mkpa
RudderStack Cloud na-eme ka ọ dị mfe maka ndị injinia data ịnakọta, kwado, gbanwee, na ịde data ndị ahịa gaa n'ụlọ nkwakọba ihe ha, ọrụ nnabata oge, yana igwe ojii nke ndị otu na-eji ụlọ ọrụ niile. Isi ihe gụnyere:
Igwe ojii nke oge a - Wuru na Kubernetes maka ụwa nke igwe ojii, lekwasịrị anya na oke oke na mmejọ, yana ntọala mmalite oghere, ihe nzuzo-nke mbụ ụlọ, yana ndị nrụpụta lekwasịrị anya iji mee ka ọ dị mfe ijikọ ngwaahịa ahụ na nchịkọta gị, ma na-ejikwa ịdị mfe nke iji ya abịa na igwe ojii SaaS.
Wlọ Nkwakọba Data - RudderStack Cloud na-enye gị ohere ịgbanwe ụlọ nkwakọba ihe gị na CDP nwere atụmatụ dịka enwere ike ịhazi, mmekọrịta dị nso na ezigbo oge, yana SQL dị ka Isi mmalite, nke na-eme ka ụlọ nkwakọba ihe gị banye na RudderStack Source.
Onye Mmepụta Mbụ - RudderStack kwenyere na nchịkọta data ndị ahịa kwesịrị ịnwe ya site na ndị ọrụ injinia, nke mere na ngwaahịa anyị na-abụkarị onye nrụpụta-nke mbụ ma jikọta ngwaọrụ ha jiri ma hụ n'anya.
RudderStack Cloud bu ezigbo ihe omuma ndi ahia nke ndi ahia.
Debanye aha maka ikpe ikpe n'efu ụbọchị iri na anọ
Tags: cdpAhịa Data Platformruddertackigwe ojii rudderstack